BabelPod, dia efa sedraina amin'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
BabelPod, efa notsapaina tamin'ny HomePod
Ny HomePod dia mbola tsy tonga tany Espana fa any Etazonia dia efa misaintsaina ny fameperana apetrak'i Apple amin'ny mpandahateny vaovao azy ny mpampiasa. Ity mpandahateny vaovao ity dia manana kalitaon'ny feo tsy mampino, fa tsy manana ny fahafaha-mampiasa ny Line amin'ny fifandraisana fampidirana ary koa mandefa feo ho azy amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth.
Izy io dia vokatra izay tsy maintsy ampiasaintsika manokana ao anatin'ny ekosistra Apple. Tsy toa ny AirPods, izay azo ampiasaina amin'ny iOS sy Android amin'ny alàlan'ny protokoloky ny fifandraisana Bluetooth.
Izany rehetra izany dia mampihena ny sahan'asan'ny HomePod ho an'ireo mpampiasa manana famandrihana Apple Music mavitrika na afaka mandefa ny feo any amin'ny HomePod amin'ny alàlan'ny protokolony AirPlay an'ny Apple. Araka ny efa fantatrao, misy mpandahateny eny an-tsena izay ny feo dia tsy alefa amin'ny alàlan'ny Bluetooth fa amin'ny alàlan'ny AirPlay, ny fomba fiasan'ny Apple.
1 Inona no atao hoe AirPlay?
2 Ahoana ny fiasan'ny AirPlay?
Inona no atao hoe AirPlay?
Miaraka amin'ny AirPlay isika dia afaka mahita ny atin'ny fitaovantsika, iPhone, iPad, iPod Touch na Mac, eo amin'ny efijery HD. Miaraka amin'ny AirPlay dia tsy ilaina ny tariby hampifandray ireo fitaovana, satria ny zava-drehetra dia atao amin'ny alàlan'ny streaming amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi ao an-trano. Azontsika ampiasaina koa izy io mba hihainoana mozika amin'ny alàlan'ny mpandahateny izay manana an'ity haitao ity.
Ahoana ny fiasan'ny AirPlay?
Tsotra dia tsotra ny fandidiana ary mila manana ilay HomePod mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi iray ihany isika, raha te-hihaino na inona na inona avy amin'ireo fitaovan'ny Apple ao aminy isika.
Raha hizara an'ity atiny ity, raha vao mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi iray ihany ny HomePod sy ny fitaovantsika. mila mandeha any amin'ny foibe fanaraha-maso fotsiny isika ary manindry ny bokotra izay milaza AirPlay. Vantany vao voafantina ianao dia mila misafidy iray amin'ireo fitaovana hiseho ao anaty lisitra iray, misafidy ohatra ny HomePod.
Noho izany, raha miasa amin'ny ekosistema Apple ianao dia tsy hanana olana ary raha te-hijery sarimihetsika amin'ny Mac ianao ary henoy ao amin'ny HomePod vitanao io. Ny olana dia tonga rehefa manana HomePod ianao ary tsy manana Apple Music na fitaovana Apple hafa. Eto no misy ny BabelPod, fitaovana iray izay mbola ao anatin'ny dingana beta ary izay avelany dia rehefa mampifandray input audio amin'ny alàlan'ny Line in na mandefa audio amin'ny alàlan'ny Bluetooth dia avadika ho AirPlay handefasana azy amin'ny HomePod. Miorina amin'ny $ 10 Raspberry Pi Zero W izay, miaraka amin'ireo singa hafa, manaova vahaolana marani-tsaina izay manome Bluetooth tsy mivantana sy ny fifandraisana an-tserasera ho an'ny mpandahateny tsy misy tariby Apple.
Ny mpamorona azy koa dia tsy maintsy nanoratra ilay rindranasa handraisana tsipika na fifandraisana Bluetooth ary adika ho renirano AirPlay azon'ny HomePod takarina. Ny interface web BabelPod dia ampiasaina mba hisafidianana ny loharano audio sy ny toerana haleha. Ankehitriny dia mijery ny olana misy izy ireo satria naharitra efa ho roa segondra, izany hoe mandra-pahoviana no hampiasan'ilay fitaovana ny signal avy amin'ny karazana iray ka hatrizay, ka tsy mety amin'ny sarimihetsika na lalao video izany. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity vokatra ity ianao azonao atao ny mampiditra an'ity tranonkala manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » BabelPod, efa notsapaina tamin'ny HomePod
MacBook miaraka amin'ny teknolojia fitaratra iPhone?